खुट्टा मिच्दा-मिच्दै श्रीमानको गोजीमा हात हालेकी श्रीमतीले जे देखिन् – List Khabar
Home / रोचक / खुट्टा मिच्दा-मिच्दै श्रीमानको गोजीमा हात हालेकी श्रीमतीले जे देखिन्
admin4weeks ago रोचक Leaveacomment 277 Views
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान–श्रीमतीको एक भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उसै पनि केही न केही भाइरल भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै एउटा हास्यास्पद भिडियो सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल भइरहेको छ ।
फेसबुक, व्हाट्स एप सहित विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेको भिडियोमा एक महिला आफ्ना श्रीमानको गोडा मिच्दैछिन् ।
यो हास्यास्पद भिडियो धेरैतिर साझा गरिएको छ । यो भिडियो मारवाडी जोक्स भनिने फेसबुक पेज द्वारा साझा गरिएको छ । लाखौँले हेरेका छन् भने हजारौँ सेयर भइरहेको छ । भिडियोमा, यो देख्न सकिन्छ कि पति खाटमा सुतिरहेकी छिन र श्रीमतीले उसको खुट्टा मिच्ने काम गरिरहेकी छिन् ।खुट्टामा थिचेर पाइन्टको गोजीमा हात राख्ने बित्तिकै, पतिले उसको हात समात्छन् । तर दोस्रो पटक पत्नी सफल हुन्छिन्
Previous के तपाईमा यस्ता संकेत छन् ? छन् भने तपाईं धेरै बुद्धिमानी र अरु के के?
Next के तपाईंलाई आकाशमा उडेको चराले दिशा गर्दियको छ ? शुभ कि अशुभ हेर्नुहोस